Saaraa Toomaas: Dhukkubsattuun kaansarii harmaa osoo addaan hinkutiin km 200 daakte - BBC News Afaan Oromoo
Saaraa Toomaas: Dhukkubsattuun kaansarii harmaa osoo addaan hinkutiin km 200 daakte
21 Fuulbana 2019
Image copyright SARAH THOMAS
Goodayyaa suuraa Saaraa Tomaas
Wal'aasanshee kaansarii harmaa waggaa darbe kan xumurte Saaraa Tomaas, boqonnaa malee laga biyya Biriiteen (English Channel) yeroo afuriif qaxxaamuruun dubartii jalqabaa taatetti.
Lagni isheen qaxxaamurte kuni qaama galaana Atlaantikii isa xinnaa yoo ta'u, qaama bishaan Kibba Ingliiziifi Kaaba Faransaayiin adda baasuudha.
Saaraan dubartii umuriin waggaa 37 yoo taatu, dorgommii cimaa kana kan taasiftee Dilbata darbe yoo ta'u dorgommichas erga sa'atii 54'f daakteen booda xumurtee jirti.
Saaraan wal'aansa kaansarii harmaa taasisaa turte bara darbe kan xumurte yoo ta'u, fiixaan bahiinsa ishee kanas ''kanneen akka kiyya du'a irraa hafaniif yaadannoo haa ta'u'' jette jirti.
Daakaan kunis km 128.2 kan fudhatu yoo ta'u, Saaraan garuu sababii bubbeen cimaa ishee mudateef, fageenya km209.2 daakuuf dirqamtee jirti.
Saaraan jiraattuu biyya Ameerikaa naannoo Koloraado yoo taatu, daakaa ishee kan xumurte Kibxata taredha.
Isheenis ''dorgommii daakaa kana injifannoon xumuru kiyyatTi amanu dadhabeera, baayyees gammadeera,'' jechuun akkuma dorgommiiishee xumurteen qarqara galaana Dovaaraa boqattee BBC'tti himtee jirti.
''Namoonni baayyeenis ana arguufi hawwii gaarii naaf ibsuuf qarqara galaanaatti argamanii turan. Isaanis baayyee gammadaniiru. Anis amanu dadhabuun naheen ture,'' jette turte.
Qaamni ishee dadhabbiin butuutuu kan himte Saaraan, guyyoota muraasaaf boqachuun barbaadas jette turte.
Inijifannoo ishee kana ilaalchisuun dorgommii bishaan daakuun kan beekame Lawiis Pagiihi fuula tiwiitari isaarratti akka ibsiteetti ''hanga dandeettii ilmaan namaa agarsiifneerra yoo jennuu, tokko tokkoos rikardii sana ni caccabsuu'' jechuun leelliseera.
Baga gammaddes jechuun gammachuusaa ibseefiira.
Haatii Saaraa Beekii Baakistar gama isaaniitiin, ''daandii jireenyaashee hundatti waliinan jira. Kan ammaa kun garuu baayyee sodaachisaa ture,'' jechuun dorgommii intallisaanii taasifte hangam cimaa akka ture BBC'tti himaniiru.
Intalli isaanii dinqisiifattuu umamaa yoo taatu, imala ishee kanaanis rakkoolee hedduufi ciniinnaa garaa cimaan mudate akka ture hindhoksine.
Wal'aansa ishee kaansarii harmaa bara darbe kan xumurte Saaraan, bishaan daakuu akka wal'aansa tokkootti itti fayyadamaa turte.
Miseensa garee deeggartoota Saaraa kan taate Elleenii Howuleeyiim gama isheetiin, ''Injifannoon hiriyyaa tiyyaa baayyee gammachiisaadha. Kan hinyaadamneefi addadha'' jechuun dinqisiifattee jirti.
Akkasumas dubartii daangaa daakuu bishaan maaraatoonii dabarteedha jetteenii jirti.
Maaraatoonii daakuuf maaltuu ishee kakaasee?
Muuxannoo bishaan daakuu kan qabdu Saaraan, qophii taasiftu kan xumurte bara 2007tti ture. Garuu yeroo jalqabaatiif galaana daakuun kan xumurte bara 2012tti yoo ta'u, irra deebiin kan qaxxaamurte bara2016tti.
Oggeessi fiilmii Joon Waashariin ''dheerina km32 yoon daakuu, kanaan ol daaku akkan danda'u natti dhagahama ture. Kanaafuu hangam deemu akkan danda'u ilaaluun barbaada,'' jechuun sababii ittiin kakaatee himti.
Isaan boodas bara 2017 baatii Adoolessaa keessa haroo Chaampiileen kan daangaa Ameerikaafi Kaandaatti argamu irratti km 168.3 daakte jirti. Isaan booda ture dhukkuubbiin kaansarii harmaa ishee mudatee kan wallaansaa eegalte turte.
Saaraan wallansa ishee kanas kan xumurte bara darbe ture. Ammas rikardiin ishee Chaanaalii Inglizii daakuun cabsite kun dhukkubsattoota kanneen akka ishee du'arraa hafaniif yaadannoo naaf haa ta'u jettee jirti.
Viidiyoo Mallattoowwan dhukkubbii kaansarii harmaa 12
Odeessaalee gaggabaaboo Onkololeessa 3,2018
Yaaddoon kaansarii dabalaa jira
5 Guraandhala 2018